China Cold ukutshiza indlela yokumakisha umatshini mveliso kunye nabathengisi | OOMATSHINI be-ACE
Iipeyinti ezibandayo zokutshiza ngesandla ngumatshini wokucinezelwa okuphezulu kunye nokuhamba okujolise kumatshini wokumakisha ongenawo umoya. Lo matshini uqhutywa yinjineli ukutyhala impompo yoxinzelelo oluphezulu ukuba isebenze, emva koko ucofe iipeyinti zokutshiza ngoxinzelelo oluphezulu. Umatshini uphela unezibonelelo zesakhiwo esilula, ukugcinwa okufanelekileyo kunye nobunzima bokukhanya. Njengokuhluka kweemodeli zemipu enye kunye nesibini sokutshiza, abasebenzisi banokukhetha ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo.
Isandla sokumakisha umatshini wokumakisha umatshini sisetyenziselwa ukumakisha kwendlela kwisikhululo seenqwelomoya, kwindawo yokupaka, kumzi-mveliso kunye nakwezinye iindawo ezibandayo ezinokumakisha, umsebenzi omncinci, ukusebenza kakuhle kokumakisha.
I-TW-CP Cold Paints Ukutshiza Umatshini
Imilinganiselo engaphandle (L * W * H) 1250 mm X1000 mm X1200mm
Ubunzima Iyonke kumatshini 240KG
Ukwaleka kufanelekile Ipeyinti yokumakisha okubandayo (i-acrylic acid)
Ukuhamba kwepeyinti 10L / Min
Ukutshiza uxinzelelo lwempompo 8-12MPA
Ukutshatisa umlomo Changjiang ngemilomo eyi
Ukutshiza umpu Ingasetyenziswa ngaxeshanye okanye ngokwahlukeneyo
Ukwaleka ubukhulu 1.2-4mm
Ibhokisi yeglasi yeglasi
Clutch inkqubo shaft bhetyebhetye
Ukusebenza kwemihla ngemihla 3000m²
Okonga 1.Energy kunye nokhuselo lokusingqongileyo: okonga 30% izinto xa kuthelekiswa zemveli ukutshiza umoya, akukho moya-uncedo, akukho ukutshiza, kunye nokhuselo lokusingqongileyo
Ithekhnoloji yokutshiza ngaphandle komoya eqhuba impompo yoxinzelelo oluphezulu ngenjini yepetroli isetyenziselwa ukumakisha kumabala ezemidlalo, imilo yomgca icacile, igudile, igcwele, kwaye iyunifom nokusebenza ngokukuko.
Isiphumo esomeleleyo: ukusebenza koxinzelelo oluphezulu lwe-atomizing, ukunamathela okuqinileyo, akukho angle ifileyo kulwakhiwo, egudileyo kunye nomphezulu.
4.The umlomo kulula ukuqaqa, kunye nemilomo eyahlukeneyo endaweni ukulawula ububanzi umgca ezahlukeneyo. Ingasetyenziswa njengesitshizi esingena moya sokumakisha okanye sokusayina.
5. Ukutyhala ngesandla, ukujika ngokukhululekileyo, ulwazelelo oluthembekileyo kunye nokujika okuguqukayo
Umpu wokutshiza owahlukileyo kububanzi bomgca ohlukeneyo
Ububanzi bomgca mm
Imilomo ukuphakama mm malunga）
Qaphela: Ukuphakama kombhobho kunxulumene ne-viscosity yepeyinti kunye noxinzelelo lwempompo yokutshiza.
1.What malunga nenkonzo yasemva kokuthengisa?
A: Sinoxanduva lokubonelela ngeengcebiso zobuchwephesha kubomi bonke beshelf. Sinceda ukusombulula iingxaki ngeWhatsapp, Skype, kunye ne-imeyile ngokuthumela imifanekiso kunye neevidiyo.
3. Kuthekani ukuthunyelwa?
Egqithileyo Umatshini wokumakisha wendlela oziqhubayo
Okulandelayo: Yonke into in-in enye yokumakisha umatshini
Ukuhamba kwe-46inx2 yokukhwela kwiKhonkrithi yaMandla aKhonkco
12000RPM Isantya esiphezulu sekhonkrithi ye-vibrator shaft
I-HCR90K-2 yokunyathela i-rammer